Sheekada filimka Super 30: Hrithik wuxuu la yimid fariin qiiro badan isagana wuu soo rogaal celiyay | Filimside
Home SHEEKADA FILIMADA Sheekada filimka Super 30: Hrithik wuxuu la yimid fariin qiiro badan isagana...
SHEEKADA FILIMADAWARARKA MAANTA
Sheekada filimka Super 30: Hrithik wuxuu la yimid fariin qiiro badan isagana wuu soo rogaal celiyay
Dadka tirada badan ee Hindiya ku nool fursada waxbarasho oo aad u yar iyo shaqooyinka oo naadir ah awgeed waxay sababta ciddii lacag heli karto ama saameyn ku leh awooda dal jiilkooda inay labada naadirka ah si tayo ku dheehan ku helaan waa waxbarashada iyo fursadaha shaqo. Sidaa darteed Xisaab yahay Anand Kumar asigoo dabaq hoose kasoo jeedo ayuu Hindiya saameyn xoogan ku yeeshay sidoo kalena arday badan oo aan dhaqaale heesanin tayo ahaan dhanka waxbarashada diyaariyay laakiin Anand Kumar cidna dadaalkiisa dunida uma gudbin markaana Superstar Hrithik Roshan ayaa fariintan qiirada badan shaashada la yimid oo dunida inteeda kale u gudbiyay.
Jilaayaasha Filimkan: Hrithik Roshan, Mrunal Thakur, Virendra Saxena, Nandish Singh, Pankaj Tripathi, Aditya Shrivastava, Vijay Varma
Waqtiga uu Soconaayo: 2-saac & 34-daqiiqo.
Fariinta Filimkan Oo Kooban: Super 30 waa sheeko ka hadleyso nolosha nin aan garab badan soo helin iyo sida uu dhalinyarada garab u sinayo asigoo aaminsan in waxbarashada ay tahay waxa kaliya ee hormar lagu gaari karo. Anand Kumar (Hrithik Roshan) waxbarashadiisa heerka sare ayuu dhameestay wuxuuna aad u jecel yahay xisaabta. Wuxuuna gaaray heer xisaabta uu ugu fiican awgeed wasiirka waxbarashada (Pankaj Tripathi) shahaadadiisa qalin jabinta gudoonsiiyo. Anand wuxuu ku caan baxaa xisaabta ilaa markii dambe uu gaaro ayadoo ay goob joog u yihiin aqoonyahano dunida ka kala timid inuu hortooda ku xaliyo mas’alo xisaabeed oo aad u adag asigoo si sahlan u kala fur furaayo.
Anand Kumar (Hrithik Roshan) dadaalkiisa wuxuu gaarsiinaa inuu waxbarasho ka helo jaamacada caanka ah Cambridge University. Waxaana lacagta ka bixiyo aabihiis Eshwar Kumar (Virendra Saxena) oo boostaale ah. Laakiin marka ay lacagta waxbarashada laga rabo ku yaraato Anand iyo aabihiis waxay u tagayaan wasiirka waxbarashada Pankaj Tripathi oo horey balan kaga qaaday inuu caawin doono laakiin markaan wuu ka diidaa inuu caawiyo oo uu waxbarashada dibada lacagaha ku baxaayo sii wada shadeeda ka bixiyo.
Dhinaca kale Anand Kumar (Hrithik Roshan) aabihiis wuu geeriyoonaa si kadis ah wuxuuna qofka kaliya ee qoyskan shaqo haayay ama wax soo kasbado. Sidaa darteed Anand riyadiisii meel ayuu iska dhigaa wuxuuna bilaabaa wadooyinka Bihar inuu ku iibiyo bur iyo jabaati gaarina riixo si nolol maal meedka qoyska usoo dhiciyo!
Maalin maal maha ka mid ah Anand waxaa arkaayo Lallan Singh (Aditya Srivastava) oo ah masuulka maamulo machadka tababarada sidoo kalena lagu diyaariyo ardayda gali rabaan imtixaanaadka jaamacada sidoo kalena waa machad ardayda lagu diyaariyo qofkii dhibco sare kaga baasana machadkan fursad u helaayo inuu fadhiisto Jaamacadaha Hindiya asigoo baran karo aaladaha casriga ah ee xisaabaadka loo adeegsado.
Mudane Lallan Singh (Aditya Srivastava) wuxuu ka warqabaa sida uu Anand Kumar (Hrithik Roshan) xisaabta ugu wanaagsan yahay wuxuuna joogay College-ka markii Anand qalin jibaanayay oo uu arday ahaa. Sidaa darteed Anand shaqo ayaa laga siinaa machadka ardayda lagu diyaariyo. Madaama si dhaqsi ah Anand Kumar ardayda wax ku baraayo wuxuu machadka ka noqonaa qof sumcad leh oo noloshiisa dib u maareeyo sidoo kalena heer sare gaaro. Waxaana dhaceyso in Anand Kumar sawiradiisa magaalada lagu dhajinaayo suuq geyn ahaan maamulka machadka waxayna ka sameenayaan lacag badan sumcada iyo wajiga Anand waxaana isagana lagu daraa gudiga saxiixyada ku leh machadka.
Laakiin si dhaqsi ah Anand Kumar (Hrithik Roshan) wuxuu ku oogaanaa ardayda aqoontooda iyo tayadooda aadka u sareyso inaysan machadka garab ka heleyn oo la baasiyo loona gudbiyo jaamacadaha ardayda kasoo jeedaan qoysaska dabaqada sare halka kuwa aan waxba heesanin si kas ah loo rido.
Anand Kumar machadkii ayuu isaga tagaa wuxuuna furanaa machad isaga u gaar ah wuxuuna go’aan ku gaaraa 30 arday inuu waxbaro oo uu u diyaariyo imtixaanaadka Jamaacada loo galaayo dhanka xisaabaadka weliba si lacag la’aan uu wax ku baro. Sidoo kale Anand wuxuu diyaarinaa ardaydaas qarashaadka ku baxaayo halka ay jiifanayaan iyo cunadooda.
Mudane Lallan Singh (Aditya Srivastava) wuxuu isku dayaa Anand Kumar inuu ka dhaadhacsiiyo talaabada uu qaaday inuu ka laabto balse marka uu ka diido isagana wuxuu la imaanaa shuruud adag oo ah ardaygii imtixaanka ku dhaco in noloshiisii faqriga ahayd lagu celinaayo. Sidaa darteed Anand Kumar wuxuu rabaa 30-ka arday uu tababaraayo in imtixaanaadka jaamacada lagu galaayo toos u galaan kana guuleestaan kuwo kale ayagoo og inay caqabado badan la kulmi doonaan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Super 30:
Sanjeev Dutta sheekada filimkan si heer sare ayuu u qoray qaybta hore balse qaybta dambe xoogaa waaqiciga ayaa laga baxaa waxayna ahayd filim fariin nololeed ka hadlaayo waxyaabaha qaar ee aan maan galka ahayn laga ilaaliyo balse sida guud fariinta filimkan waa mid qiiro badan halka saac horena heer sare ah halka saac damb habacsanaan ka muuqato sidoo kalena ay fiicneyd in 25 daqiiqo laga jaro waqtiga uu soconaayo.
Director Vikas Bahl filimkan sida uu u agaamisay waa mid wanaagsan weliba halka saac hore si soo jiidasho leh ayuu u agaasimay balse halka saac dambe qaabka qoraalka sheekada loo dhigay oo yara liidato awgeed isagana kaalintiisa wuu ka gaabiyay laakiin nasiib wanaagsan Hrithik Roshan ayaa mashruucan horey u dhaqaajiyay oo kugu qasbaayo min bilaaw ilaa dhamaad inaa daawatid bandhigiisa Classic ah.
Hrithik Roshan wuu soo rogaal celiyay shaki kuma jirto ruuxda filimkan inuu isaga yahay sidoo kalena bandhigiisa taariikhiga ah wuxuu qof walbo ka dhaadhicin doonaa in Anand Kumar uu shaashada hor taagan balse aadan Hrithik daawaneyn hubanti ahaan filimka Super 30 iin walbo oo qaybta dambe loo yeeli lahaa Superstar-kan ayaa meesha ka saaray waana filim uu mudan yahay in abaal marino lagu siiyo markalena wuxuu muujiyay HR inuu yahay jilaa dahabi ah oo aysan Bollywood-ka ka maarmin marka ay imaado ka run sheegida doorarka dhibka badan.
Mrunal Thakur (Rashmi) doorkeeda waa mid wacan laakiin saameyn adag filimkan kuma lahan. Sidoo kale Aditya Srivastava doorkiisa laadarnimo waa mid kusoo jiidanayo. Pankaj Tripathi doorkiisa wasiirnimo waa mid xiiso leh sidoo kalena guud ahaan dhalinyarada filimkan kasoo muuqdeen ee ardayda ku matalayaan iyagana micno ayay ku leeyihiin filimkan fariintiisa waaqiciga tahay.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka 30
Bandhiga Hrithik Roshan oo mid heer sare ah kuna soo jiidan doono iyo fariinta qiirada badan
Fariintiisa waaqiciga ah ee halka saac hore si heer sare ah loo agaasimay
Muusiga gadaal ka yeereyso Background Score-ka oo si saameyn leh u diyaariyeen Ajay-Atul.
Goobaha lagu duubay oo ah halkii saxda ahayd kana muuqato nolosha dhibka badan ee Bihar ka jirto iyo sida guud fariinta Anand Kumar oo halkii ku habooneyd laga been sheegin
Muxuu Ku Liitaa Filimka Super 30
Halka saac dambe habac sanaan ayaa ka muuqato waxaa fiicneyd in waqtigiisa 25 ilaa 30-daqiiqo laga yareeyo madaama uu yahay filim nolol waaqici ah ka hadlaayo.
Heeso hirgaleen ama saameyn leh kuma jiraan filimkan waa mid kale oo caqabad kale ah.
Qiimeynta Fariinka Filimkan: 3/5 (Sedex xidig)
Super 30 waa filim Hrithik Roshan bandhig taariikhi ah ka sameeyay, dareekiisa qiirada oo aad u sareyso iyo halka saac hore oo si heer sare ah loo sameeyay awgeed waxay sababi doontaa qofkii daawado inuu mashruucan saameyn adag ku yeesho wax badana ka barto fariintan waana hubaal in daawadayaasha tiyaatarka Hrithik markaan soo dhaweyn doonaan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Super 30 ee Hrithik Roshan sida weyn looga amaanayo qaab jiliinka uu shaashada la yimid:
Previous articleMorning Update: Filimka Super 30 oo ku furmay si gaabis ka muuqato subaxan
Next articleShabakada BOI oo sheegtay in filimka Super 30 si dhex dhexaad ah ku furmay